Turkiga oo Soomaaliya ugu deeqay qalab Oksijiin | KEYDMEDIA ONLINE
Turkiga oo Soomaaliya ugu deeqay qalab Oksijiin
Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga ayaa ugu deeqday Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya 10 ventilators, sida ay Jimcihii sheegtay safaaradda Turkiga Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga ayaa ugu deeqday Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya 10 ventilators, sida ay Jimcihii sheegtay safaaradda Turkiga Soomaaliya.
"Mashiinnada lagu wareejiyay mas'uuliyiinta Soomaaliya waxaa loo isticmaali doonaa qeybaha daryeelka degdegga ah waxayna gacan ka geysan doonaan dagaalka lagula jiro COVID-19," ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay safaaradda.
Dr. C / risaaq Yuusuf Axmed, oo ah sarkaal ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka ayaa shegay in Mashiinadaan Oksijiinka bixiya ay dalka ka caawin doonaan la dagaallanka COVID-19. Wuxuu uga mahadceliyey Dowladda Turkiga taageerada ay ka geysteen la-dagaallanka aafada COVID-19.
Horraantii toddobaadkii dhamaaday, waxaa la sheegay in isbitaallada Muqdisho ay ka dhammaadeen qalabkii Oksijiinka taas oo abuurtay xaalad aann caadi ahayn.
Dhaqaatiirta isbitaallada waxa ay sheegayaan in xaladdu ka sii dari karto haddii aan la helin warshad Oksijiin waddanka ku filan soo saarta oo dalka ku taalla.
Turkigu wuxuu hore u ballan qaaday inuu taageeri doono dhisidda warshad xooggan oo soo saarta Oksijiinka, si loo yareeyo dadka dhibaatadu ka soo gaareyso la’aanta adeegaan.
Xaaladda Isbitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho hadda waa mid wanaagsan ka dib markii ay Hormuud Salaam Foundation gaarsiisay qeyb ka mid ah oksijiinkii ay hore ugu yaboohday, hayeeshee xaaladda ayaa mar kasta xumaan karta.